SAWIRRO: Xafladda Xilwareejinta Madaxweynihii hore Iyo Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya | SAHAN ONLINE
SAWIRRO: Xafladda Xilwareejinta Madaxweynihii hore Iyo Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
MUQDISHO – Munaasabad si wanaagsan loo soo qaban qaabiyey oo ay xilalka kula kala wareegayeen Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhacday xarunta Madaxtooyada ee Villa Somalia.
Xafladda xil-wareejinta ayaa waxaa ka qeybgalay Guddoonka Baarlamaanka,labada aqal,Wasiirada xukuumadda xilka sii-haysa,Xildhibaanada labada golle iyo marti sharaf kale iyo bahda Saxaafadda.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo dhaweeyey xarunta Madaxtooyada ,Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ugu horeyn Madaxweynihii hore ayaa xilka ku wareejiyey Madaxweynaha cusub,Dekemontiyadii intii uu xilka hayey ,sidoo kale waxa uu ku wareejiyey hadiyadihii uu kusoo gudoomay magaca Soomaaliyeed,waxaana kamid ahaa seef dahab ah,agabyo isugu jiray dahab,qallin iyo maar.
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mahadceliyey hadiyadaha uu ka guddoomay,sidoo kalena ku ammaanay Madaxweynihii hore hawsha uu u qabtay qaranka mudadii afarta sano ahayd ee uu xilka hayey.
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu sagootiyey astaanta qaranka iyadoona uu Madaxweyne Farmaajo wixii maanta ka danbeeya uu si rasmi ah ugu shaqeyn doono xarunta Madaxtooyada.
Hoos ka daawo sawirrada xilwareejinta